यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा काठमाडौंबाट ७१ जना पक्राउ
काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल प्रहरीले उपत्यकाका सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने ७१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। साउन १८ गतेदेखि महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले सुरु गरेको सेफ्टी पिन अभियानमा ती व्यक्ति पक्राउ परेका हुन्।
यसका लागि प्रहरीले ३३ वटा टोली बनाई उपत्यकामा गुड्ने विभिन्न सार्वजनिक सवारी साधनमा सादा पोसाकमा एक महिना अघिदेखि निरन्तर रुपमा प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ। उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा दुर्व्यवहार गर्नेमध्ये काठमाडौँबाट ६१ जना पक्राउ परेका छन् भने ललितपुर र भक्तपुरबाट ५र५ जना पक्राउ परेका छन्।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यौनजन्य दुर्व्यवहार र अपशब्द गालीगलौज गर्ने ४८, अश्लील हर्कत गर्ने १० र अन्य ५ जना पक्राउ परेका छन्। यस अभियान अन्तर्गत खटिएका प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधनमा पाकेटमार्ने ८ जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।
पक्राउ परेकामध्ये हिंसाको गाम्भीर्यता अनुसार २४ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ भने ४७ जनालाई यस्तो कार्य नदोहोरिने गरी आफन्तको जिम्मा लगाईएको प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यौनजन्य दुर्व्यवहार र गालीगलौज गर्ने ४८ मध्ये सबैभन्दा बढी साधारण लेखपढ जानेको ३८ जना छन् भने स्नाकोत्तर गरेका १ जना समेत रहेका छन्। यस्तो हिंसाजन्य क्रियाकलापमा १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहको बाहुल्यता रहेको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ।
भागवण्डामा राजदूत बन्ने चर्चामा को–को छन् ?
मुगुमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप, सात जना प्रर्दशनकारी पक्राउ
पुनर्निर्माणपछि बौद्धनाथ चैत्यको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन
योगगुरु रामदेव काठमाडौंमा
एमालेले अब सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने
डा. केसीको मागबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी